Jesus Nwoke. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke ikwughachi nke onyinyo | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto. Jesús Valero, profaịlụ Twitter.
Jesus Nwoke sitere na San Sebastián, Dọkịta na Nkà Mmụta Nkà na Ọgwụ ma na-elekọta ya ugbu a Teknụzụ, ụlọ ọrụ R & D kachasị ukwuu na ndịda Europe. Na n'oge oge ya ọ na-ede. Na mmasị pụrụ iche n'akụkọ ihe mere eme oge ochie na emepechabeghị, ọ pụtara na akwukwo na Ahụhụ a na-apụghị ịhụ anya ma ugbu a ị nwere akụkụ nke abụọ, Nkuzi mgbameji nke onyinyo. Daalụ nke ukwuu maka oge gị na obiọma gị raara nye nke a Ajụjụ ọnụ.
Jesús Valero - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Nkuzi mgbameji nke onyinyo bụ akwụkwọ akụkọ ọhụụ gị na ịga n'ihu nke Ahụhụ a na-apụghị ịhụ anya. Kedu ihe ị gwara anyị n'ime ya?
JESÚS VALERO: Ọ bụ a akụkọ ihe mere eme gụọ n'ime ugboro atọ. Marta, onye weghachiri ihe osise, chọtara otu akwụkwọ ochie. Ọ bụ ederede Jean, otu agwa mmadụ biri na narị afọ nke iri na abụọ. N'ime akwụkwọ m, anyị ga-agbaso ọhụụ nke abụọ, ndị na-anwa ịzobe ma chọpụta a oge ochie site n’oge Jizọs Kraịst. N’oge na-adịghị anya, ha abụọ ga-amata na ha na-etinye ndụ ha n’ihe egwu ma na ihe ochie a bụ ihe ụka chọsiri ike na-achọ. Agụ ga-achọpụta a akụkọ ihe mere eme akụkọ, zuru okè set, ga-esokwa ndị protagonists gaa ebe obibi ndị mọnk ochie na akwụkwọ edemede oge ochie na-anwa ịchọta igodo ndị zoro ezo na ụka ochie na ihe odide oge ochie
JV: Echere m na ọ ga-abụ akụkọ banyere ise ma ọ bụ Hollister. Mgbe ahụ, m ngwa ngwa mikpuru onwe m na njem akwụkwọ nke Verne o Salgari tupu ịchọta afọ iri dị n'akwụkwọ nke mere ka m chọọ ide: Onyenwe nke mgbaaka. Akuko mbu mbu m edere bu Ahụhụ a na-apụghị ịhụ anya. O were m ihe ruru afọ iri abụọ tupu m chee ma dee ya. Ọ bụ ya mere, n'agbanyeghị na ọ bụ onye edemede ọhụrụ, ọ bụ akwụkwọ buru oke ibu nke nwere atụmatụ dị mgbagwoju anya ma dị mfe ịgbaso.
JV: N'oge ntorobịa m n'enweghị obi abụọ ọ bụla Tolkien. Mgbe ahụ toro eto, ana m agbali ịgụ ihe niile, edemede na ụdị ọ bụla. Ọ na-enyere m aka ịmụ ma kwuzie akụkọ ndị ka mma. Ọ bụrụ na m ga-ekwu ndị bụ ọkacha mmasị m ndị edemede, m ga-asị Murakami na Paul oporo. N'ime ndị edemede Spanish m nwere ike igosipụta ọtụtụ, mana m ga-eme ka ọ mata ihe m mụtara na Perez-Reverte banyere otu o si emeso ihe omume siri ike mgbe niile.
JV: O siri ike ịhọrọ otu. Ikekwe m ga-ekwu Anya, na Onyenwe nke mgbaaka. Ọ bụ ngwakọta nke onye na-atụgharị uche nke njem bụ eziokwu nke ọhụụ ya banyere ụwa, onye nwere ihe mgbaru ọsọ na ndụ ma na-agbasi mbọ ike inweta ya, mana ọ naghị adị njikere ịme ya n'ụzọ ọ bụla. Nwee a koodu nke nsọpụrụ nwe nke oma. Otu n'ime ndị protagonists nke Ahụhụ a na-apụghị ịhụ anya, onye isi ojii, n'agbanyeghị na ọ dị iche, nwere ụfọdụ n'ime àgwà ndị ahụ na-atọ m ụtọ.
JV: M Ana m eji aka, tupu na akwụkwọ ndetu, ugbu a na ngwaọrụ nke na-enye m ohere ịga n'ihu na-eme ya mana ọ na-enye m uru na ọ na-emezi aka aka m na digitizes ya ozugbo. Ka oge na-aga, na mmezi, m na-eme ya na mpempe akwụkwọ naanị mgbe m gụchara ya, m na-ewebata mgbanwe na kọmputa ahụ, ihe m na-atụgharị ugboro ugboro.
JV: Achọrọ m oke mkpọtụ gbara m gburugburu. Ana m ede n’ụlọ ahịa kọfị, ọdụ ụgbọelu na ụlọ nri mgbe m na-eme njem. Ana m achọ ihe ịgbachi nkịtị. N'afọ ndị na-adịbeghị anya m na-edekarị n'ime ụgbọ mmiri n'oge ezumike. Fọrọ nke nta ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke Nkuzi mgbameji nke onyinyo Edere ya n'ime otu ọnwa na m na-eme nchọgharị.
NJV: Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile masịrị m. Dị ahụ adịghị m mkpa, enwere m ike ịgụ akwụkwọ akụkọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ mpụ, echiche efu, akụkọ sayensị ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ na-enweghị okike. M na-amụta site na ihe niile ma echere m na ọ na-enyere m aka ịkọ akụkọ kacha mma. N'ezie ihe masịrị m na-agbanwe ndị edemede oge niileAna m enweta ihe dị iche iche na nke ọ bụla.
JV: Ugbu a, m na-agụ ụfọdụ ndị ochie. Ugbu a, m na-agụ Ncheta nke Hadrian nke Margarite Yourcenar dere na nke mbu aburula Mba ọzọ nke Albert Camus dere, nke m choro igu ya na nke mbu ya na French. Banyere ihe m na-ede, n'oge a Ana m aga n'ihu na akwụkwọ ọhụrụ m, nke na-enwebeghị aha ma ga-emechi akaghị site na ìhè a na-adighi ahu anya na nkuzi nke onyinyo. Enwere m olileanya ịmecha ya na njedebe nke afọ, ọ bụ ezie na ọ dabere na m nwere ike ide ọtụtụ ihe n'oge ọkọchị a. Enwere m n'uche akụkọ atọ ọzọ Achọrọ m ịgwa, ma agaghị m ekpebi otu n’ime ha ruo mgbe m mechara nke gara aga ma nyefee ya onye mbipụta akwụkwọ ahụ.
JV: Ikekwe abụghị m ezigbo ihe atụ nke ọnọdụ ahụ. Bipụta akwụkwọ akụkọ m abụọ abụghịrị m ajọ nrọ. Enwebeghị m mbipụta tupu mgbe ahụ ma ọ bụ na amaghị m onye ọ bụla na ụwa na-ebipụta akwụkwọ, mana ihe odide m dọtara ozugbo Pablo arezlvarez, onye na-elekọta m Editabundo. Ozugbo nke a bụ ikpe, ihe niile gara ngwa ngwa na Carmen Romero si Penguin Random House kwuru ee ozugbo ọ gụrụ ya. Amaara m na maka ndị edemede ndị ọzọ ihe niile gbagwojuru anya na ikekwe ọ pụkwara ịbụ maka m n'ọdịnihu. Inweta ihe edere site na ederede dị mgbagwoju anya, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole nwere ike ime ya, na echeghị m nke ahụ. Enwere m mmasị na ọrụ m na ide ihe ga-anọgide na-abụ ihe m hụrụ n'anya mana nke m na-eme n'enweghị nrụgide.
JV: Ana m emegharị nke ọma n'ọnọdụ ọ bụla ma enwebeghị m nsogbu COVID a. Enwerem uru: Abụ m microbiologist na m ghọtara ihe na-eme na ihe nwere ike ime karịa ndammana karịa ọtụtụ mmadụ. Nke a bụ ihe nwa oge ma n'oge na-adịghị anya anyị ga-alaghachi na ndụ anyị. Ihe m doro anya bụ na ọnọdụ a agaghị abụ isi mmalite nke akwụkwọ m, enweghị m mmasị na isiokwu ahụ site n'echiche ahụ. E nwere ọtụtụ ihe ndị ka mma ị ga-ede.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Jesus Nwoke. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke nkuzi nke onyinyo